Imbiki Herilaza: “Sarotra ny hanakiana…” | NewsMada
Imbiki Herilaza: “Sarotra ny hanakiana…”
“Raha toy izao ny fitohizan’ny elanelam-bato azon’ireo kandidà, mety ho sarotra ihany ny hanakiana ny fandresen’ny kandidà lany eo.” Izay ny fanehoan-kevitry ny mpahay lalàna, Imbiki Herilaza, manoloana ny voka-pifidianana vonjimaika avoakan’ny Ceni tamin’ny latsa-bato nifidianana filohan’ny Repoblika, fihodinana faharoa.
Fantatra fa ny Ceni no hamoaka ny voka-pifidianana vonjimaika, ary ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) no hamoaka ny voka-pifidianana ofisialy. Aorian’ny famoahan’ny Ceni izay voka-pifidianana vonjimaika izay, roa aorian’izay no afa-manomboka ny fitoriana eny anivon’ny HCC.
Ny dikan’izay: tokony ho any amin’ny HCC no mitondra fitoriana izay tsy afa-po amin’ny voka-pifidianana vonjimaika havoakan’ny Ceni, fa tsy eny an-dalambe. Efa nisy ezaka mafy ihany nataon’ny Ceni mba hampangarahara ny fitantanana ny fifidianana. Hiaraha-mahafantatra fa afa-manana dika mitovy ny fitantanana an-tsoratra (PV) any amin’ny HCC sy ny Ceni ny delegen’ireo kandidà sy ny HCC.